ရွှေသာလျောင်း ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ - Bago Regional Government
Home / ရွှေသာလျောင်း ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး
ရာဇာမင်းအပေါင်း သုံးကျိပ်ကျော်တို့၏ စိုးစံရာ ဟံသာ၀တီ (ပဲခူး) မင်းနေပြည်တော် ပဌမမြို့တည်မင်းဆက် ၁၃ – ဆက်မြောက် မိဂါဒိပ္ပမင်းငယ်စိုးမိုးအုပ်ချုပ်မင်းပြုလုပ်တော်မူစဉ် မင်းနှင့်တကွ တိတ္ထိရဟန်း သေရည်သောက်ကြူး လူရူးမှူးမတ်တို့သည် (န၀င်္ဂူ)နတ်ရုပ်အား ပူဇော်ယစ်မှု ကိုးကွယ်ပြုလျှက်၊ ဒိဋ္ဌိလွှမ်းမိုး ဒုစရိုက်များကြီးစိုးစဉ်၊ မင်း၏ချွေးမတော် မွန်အမျိုး သမီး (ဒလထော်)မှ ဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရား၏ တရားတော်များ အကိုးအကားနှင့် ဟောကြား ပဲ့ပြင် လျှောက်တင်တော်မူသဖြင့်၊ မင်းနှင့်ပြည်သူ ဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရား၌ တည်ကြလျှက်၊ သက္ကရာဇ် ၃၅၆ ခုနှစ်၌ (မိဂါဒိပ္ပ) မင်းငယ်သည် နေပြည်တော်အနောက်စူးစူးအရပ် မွန်အခေါ် (ဒေကလွန့်) ဟူသော နံ့သာပင်တို့ဖုံးသည့် ဤကုန်းတော်ပေါ်တွင် ”ဥဒ္ဒိသက စေတီ၀င်” သံတောင်(၁၂၀)ရှိ တော်မူသော “ရှင်ပင်သာလျောင်း” ခေါ် “ရွှေသာလျောင်း” ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအား တည်ထား ကိုးကွယ် ကောင်းမှုကုသိုလ်တော် ပြုခဲ့လေသည်။
မိဂါဒိပ္ပမင်းငယ်မှစ၍ ရှေးမင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ကုသိုလ်ပြုခဲ့ကြရာမှ လွန်၍ သာသနာပြုမင်းများမရှိသည့် နှစ်ပရိစ္ဆေဒချိန်ကာလ၌ နိမ္မိတရုပ်ပွား ရှင်မြတ်ဘုရားမှာ ချုံနွယ်ပိတ်ဖုံး တောင်ကုန်းသဖွယ် (လောကတ္တစရိယ)အလို့ငှာ၊ သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့ရလေသည်။ ဗြိတိသျှလက်ထက် ၁၂၄၂ ခုနှစ် အောက်မြန်မာပြည် ရန်ကုန်-ပဲခူး မီးရထားလမ်းဖောက်ရာ၌ အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသား ကန်ထရိုက်တစ်ဦးက အုတ်ဖုတ်ပေးသွင်းရန် မြေများတူးယူရာ ပေါ်တော်မူ ခဲ့၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င် သူတော်စင် ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ လုပ်သားပြည်သူတို့မှ ရှေးမူမပျက် မွမ်းမံလျှက် ကုသိုလ်ကောင်းမှု အဆက်ဆက်ပြုခဲ့ကြလေသည်။
၁။ အလျားတော် ၁၈၀ပေ
၂။ အမြင့်တော် ၅၂.၅ပေ
၃။ မျက်နှာတော် ၂၂.၅ပေ
၄။ နားတော် ၁၅ပေ
၅။ မျက်လုံးတော် ၃.၅ပေ
၆။ မျက်ခုံးတော် ၇.၅ပေ
၇။ မျက်ခမ်းတော် ၇.၅ပေ
၈။ နှာခေါင်းတော် ၇.၅ပေ
၉။ နှုတ်ခမ်းတော် ၇.၅ပေ
၁၀။ လည်တိုင်တော် ၇.၅ပေ
၁၁။ ပခုံးတော်မှ ခါးတော်အထိ ၄၇.၅ပေ
၁၂။ ခါးတော်မှ ဒူးတော်အထိ ၄၇.၅ပေ
၁၃။ ဒူးတော်မှ ခြေဖဝါးတော်အထိ ၄၇.၅ပေ
၁၄။ တထောင်ဆစ်မှ လက်ဖျားအထိ ၄၅ပေ
၁၅။ လကသန်းတော် ၁၀ပေ
၁၆။ ခြေဖဝါးတော် ၂၅.၅ပေ
၁၇။ ခြေမတော် ၆ပေ
၁၈။ လက်ဖဝါးတော် ၂၂ပေ
၁၂၄၂-ခုနှစ် တွင်တောဖုံး၍ တောင်ကုန်းသဖွယ်စံပယ်ရာမှ ပေါ်တော်မူ၍ အသစ်တဖန် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၁၂၆၂-ခုနှစ် ဂန္ဓကုဋိတန်ဆောင်းတော်ကြီး တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၁၂၇၀-ခုနှစ် မျက်နှာတော်ရှေ့ရှိ သံပန်း၀န်းရံဆောက်လုပ်ပြီးစီးသည်။
၁၂၉၃-ခုနှစ် ဘုရားရင်ပြင်တော်၌ ကျောက်ပြားခင်းသည်။
၁၂၉၈-ခုနှစ် နဖူးသင်းကျစ်နှင့် ခြေဖဝါးတော်စက်လက္ခဏာမှန်စီသည်။
၁၂၉၉-ခုနှစ် ဘုရားအုန်းတော်ကြီးမှန်စီ၍ မျက်နှာကျက်ပြုလုပ်သည်။
၁၃၁၆-ခုနှစ် ခေါင်းရင်း ဂန္ဓကုဋိသံတန်ဆောင်း တိုးချဲ့ပြုလုပ်သည်။
၁၃၂၀-ခုနှစ် ခြေရင်းတော် သံတန်ဆောင်းနှင့် လှေခါးသံတန်ဆောင်းစသည်တို့ ဆောက်လုပ် ပြီးစီးသည်။
၁၃၆၃-ခုနှစ် အရှေ့ဘက်မုခ်ဦးဆောင်နှင့် စောင်းတန်းတော်ကြီးအား အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးသည်။
၁၃၇၂-ခုနှစ် ဝါခေါင်လပြည့်ကျော်(၄)ရက်(၂၉-၈-၂၀၁၀)နေ့တွင် ကိုယ်လုံးတော်ပြည့် ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူပြီးစီးသည်။ ယနေ့တိုင် ဂေါပကအဖွဲ့၀င် လူကြီးများအဆက်ဆက် ပြုပြင် မွမ်းမံနေလျှက်ရှိပါသဖြင့် အလှူတော်ငွေများ ထည့်၀င်လှူဒါန်းတော်မူကြပါရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
1881.A.D Reconstruction of the holy image
1903.A.D Consttruction of main building.
1909.A.D Iron railing in front of the image.
1932.A.D Laying of Italian marble slabs.
1937.A.D Forehead and Foot prints are onamented
1938.A.D Great pillows are decorated with mosacic work. Construction of ceiling above the image.
1955.A.D GI. Pipe railing around the entire platform. GI. Pipe railing around the entire platform.
1959.A.D Extension of iron building on the northen side.